an-trano > Travel Europe > 5 Toerana Picnic tsara indrindra any Eoropa
Train Travel, Train Travel Repoblika Tseky, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 11/04/2022)
Petrin Hill dia tonga lafatra amin'ny fanaovana piknik any Eropa amin'ny lohataona, latsaka na fahavaratra. The leafage will look manaitra ny fahalavoana ary amin'ny lohataona sy ny fahavaratra dia hamelana ny hazo sy ny tany rehetra ary hamirapiratra maitso. Ento fotsiny ny tenanao sasany amin'ny voankazo avy Artic Bakehouse ary ianareo rehetra dia natao hanaovana fitsangatsanganana mahafinaritra iray any Prague.
Rindrona manga sy tampon-tendrombohitra manga mitaratra ny farihy, the views of Lake di Braies in South Tyrol in Italy will color your picnic with beautiful memories. Ny any Italia dia culinary lanitra, atambatra farihy mahavariana ary ny tendrombohitra, tena tsy ilaina ny mamelabelatra momba ireo antony maro hita ao an-dranomasina izay 5 toerana piknik tsara indrindra any Eoropa.
Amin'ny kamiao na fiara fitateram-bahoaka, Ny nosy Margaret dia tena be mpampiasa amin'ny fitateram-bahoaka. Torohevitra avy ao anaty: Budapest Card dia mahazo anao extraes manokana ho an'ny fitateram-bahoaka sy manintona.
Paris tsy tambo isaina zaridaina mahafinaritra sy ireo toerana fitsangantsanganana eny akaikin'ny Seine. Ny toerana fanaovana piknik tsara indrindra any Paris dia marina manerana ny haben'ny lalao Champs de Mars.
Efitra maitso mahafinaritra eo anelanelan'ny arrondissement fahafito sy ny Tilikambon'i Eiffel. Izy io dia tonga lafatra amin'ny fitsangantsanganana iray any Paris ary manolotra seho tsara indrindra amin'ny filentehan'ny masoandro. Ho fanampin'ny tontolo, Iray ihany koa ny 10 fomba fijery tsara indrindra ao amin'ny Eiffel Tower any Paris.
Isaky ny vanin-taona mafana ny fianakaviana Paris dia tonga ny masoandro milentika na mankafy ny fahalavan'ny zaridaina. Milamina tokoa izy io ary manome toerana mahafinaritra hijerena ireo jiro amin'ny alina Eiffel Tower.
Te-hampiditra am-peo bilaogy "5 Toerana Picnic In Europe" tsara indrindra amin'ny tranokalanao ve ianao?? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-picnic-spots-europe%2F%3Flang%3Dmg Nyawang– (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
fitsangatsanganana	picniceurope	PicnicinParis	picnicspotseurope	picnictable	summertravel	TravelPrague	travelswitzerland
Train Travel, Train Travel Austria, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby any Soeda, Train Travel The Netherlands, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe